theZOMI: [aurorageneration] Re: သူတို့မူနဲ့သူတို့လူ
[aurorageneration] Re: သူတို့မူနဲ့သူတို့လူ
အလ္လာ ကိုယ်တိုင် ဘယ်အရာက...ကုသိုလ် ၊ ဘယ်အရာက...အကုသိုလ်...ဆိုတဲ. အမှား အမှန် ခွဲခြားမပြ ခဲ.နိင်လေတော. အလ္လာရဲ. မျိုးဆက်တွေ တိရစ္ဆာန်တွေလို..ရုတ်မာ ရိုင်စိုင်း
စိတ်ကူးယဉ်.သက်သက်မဟုတ်ရပါ၊။ ကမ္ဘာနဲ.တစ်ဝှမ်းမှာကြည်.လိုက်ပါ... သဘာဝဘေးနဲ. အငတ်ဘေး စစ်ဘေး
ဆိုတာနဲ. အရှေ.အလယ်ပိုင်းက အလ္လာရဲ. သားတော်သမီးတော် နိင်ငံတွေမှာပဲဖြစ်နေကြတာပါ... ဒါဟာဘာလဲဆိုတော. ကိုယ်ပြုတဲ. အကုသိုလ်ကံတွေပဲ ကိုယ်ပြုတဲ.အစါန်းရောက်မှုတွေကပဲ ၄င်းတိုရဲ. ပတ်ဝန်းကျင်ကို အငတ်ဘေးနဲ. စစ်သလင်းကိုဖြစ်စေတာပါပဲ... ယခုတော. ကမ္ဘာ.နိင်ငံတိုင်းရဲ. ဘာသာမျိုးစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံက
ဒါကြောင်. နိင်ငံအများစုက...အစ္စလာမ်လူမျိုးဆိုလျှင်... မနှစ်မျို.တာမဆန်းပါဘူးးးး ဘယ်လူသားမှ... ယုတ်မာရိုင်းဆိုင်းသော...အစွန်းရောက်သော အလ္လာသားတော်..သမီးတော်
အစွန်းရောက် ဂျီဟတ်ကုလား..မိသားစုများနှင်.နေချင် ကြမည်မထင်ပါ.... လူသားတိုင်းငြိမ်အေးသော...တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး လေးစားသော....နားလည်မှုရှိသော..မေတ္တာတရားတို.
နှင်.လွမ်းခြုံသော လူသားဆန်သော...အသိညဏ်ရှိသော လူများနှင်.သာ...ပေါင်းသင်းနေထိုင်ချင်ကြပြီး အစ္စလာမ်ကုလားတို.နှင်. ဘေးချင်းကပ် လျှက်...၊ ခုံချင်းကပ်လျှက်... ၊ တစ်ရပ်ကွက်တည်း ... တစ်နိင်ငံတည်း အတူတကွနေချင်ကြမည်မဟုတ်ကြောင်း အကြွင်းမဲ. ယုံကြည်လျှက်....
2013/3/16 Haroon <roon.ha@gmail.com>
သူ များ မျက် နှာ ကို ချေး နဲ့ သုတ် ဖို့ကိုယ် ကိုယ် တိုင် ချေး ကို အ ရင် ကိုင် ရ တယ်။
အေ မီ ရေ နင့် လက် က တော့ တော် တော် လေး ချေး စော် နံ နေ လောက် ပြီ။
ထ မင်း စား ရင် ဇွန်း နဲ့ စား နော်
အ ကြံ ပေး တာ.
I amaMuslim and I am always proud to beaMuslim.
နင် တို့ဘယ်လို ပဲ စော် ကား စော် ကား အစ္စလာမ်သာသနာဟာ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သာသနာပါပဲ။
On 16 Mar 2013 10:05, "Amy Zar Haling" <illustrator.yourdream@gmail.com> wrote: